Baxreyn oo si buuxda u aqoonsaneysa Israel. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Baxreyn oo si buuxda u aqoonsaneysa Israel.
Baxreyn oo si buuxda u aqoonsaneysa Israel.
Baxreyn ayaa noqtay dalkii ugu dambeeyay ee carbeed oo si buuxda u aqoonsanaya Israel kadib wada xaajood lagu hagaajiyay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac, arrintan ayaa qeyb ka ah cadaadis diblomaasiyadeed ee Madaxweyne Donald Trump uu maamulkiisu ay ku doonayaan in si buuxda Israel ay qeyb uga noqoto bariga dhexe.
Trump ayaa Jimcihii ku dhawaaqay heshiiskan, kadib wadahadal saddex geesood ah oo uu la yeeshay Ra’iisul-wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo Boqorka Baxreyn Hamad bin Ciisa Al Khalifa. Saddaxda hoggaamiye ayaa sidoo kale si wadajir ah u soo saaray bayaan kooban oo caddeynaya heshiiskaasi.
Tallaabadan xriirka Israel iyo dalalka carbeed ayaan kusoo beeggantay sanad-guuradii 19-aad ee weeraradii Argagaxiso ee 11 September 2001 ayaa timid wax ka yar toddobaad marka uu Trump martigelin doono xaflad ka dhaceysa Aqalka Cad taasi oo lagu saxiixi doono heshiiska lagu aas-aasayo xiriirka buuxa ee Israel iyo Imaaraatka Carabta. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Baxreyn ayaa isna ka qeybgali doona munaasabadda.
Previous articleAl-shabaab oo khasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray qarax ay ku aasayeen Gaarisa.
Next articleMadaxweynaha Jubbaland oo hay’adaha ammaanka amray baarista qaraxii Kismaayo.